Coating - Changzhou longxin milina Co., Ltd
Coating dia mitohy horonantsary izay mifono eny ambonin'ny voaravaka iray arovana na zavatra ary azo mafy tia ny coating. Tsy viscous rano, mazàna no vita tamin'ny resin, diloilo ary emulsion miaraka na tsia amin'ny loko, fillers, additives, ranoka mandevon-javatra na rano organika.
Taorian'ny fe-potoana lava ny fampandrosoana, coating no tena sarotra. Mba hanamora ny fitantanana sy ny fampiasana, ny fomba fanasokajiana isan-karazany no niforona coatings sy ny toetra manokana. Amin'izao fotoana izao, tena nandray coating fanasokajiana dia toy izao manaraka izao:
Araka ny karazana sarimihetsika-namorona fitaovana, coating dia azo zaraina ho resin alkyd coating, polyurethane coating, emulsion coating, nitrolacquer, acrylic coating, epoxy resin coating, sns
Araka ny fampiasana samihafa, dia azo zaraina ho voaloko lacquer, hazo lacquer, fiara coating, fifamoivoizana loko, an-dranomasina loko, fitaratra coating, vy coating, sns
Araka ny fomba paharitry hafa, dia azo zaraina ho rivotra-paharitry loko, stoving varnish, UV nanasitrana coating, sns
Araka ny endriky ny coating, dia azo zaraina ho vovoka coating, ranoka coating.
Araka ny asa ny coating, dia azo zaraina ho nitarika loko, miaro loko, anti-harafesina loko, hafanana-mahatohitra loko, sns
Longxin manome fitaovana maro toy ny fanamboarana coating AkzoNobel, MAYDOS, Asiana loko sy ny sisa.
Fahazoan-dalana hidirana ny fitaovana ho an'ny famokarana coating: YS andian-dahatsoratra telo-roller hydraulic fikosoham-bary, WSJ andian-dahatsoratra marindrano hihena anatiny-miasa feno Bead fikosoham-bary, WSD andian-dahatsoratra mikoriana mafy fasika fikosoham-bary, WSS andian-dahatsoratra marindrano sy fikosoham-bary, WSK andian-dahatsoratra High-viscosity zavatra maro loatra Bead bary
Product-dalana: coating / levitra / fanafody / herbicide vokatra tsipika